Mikarakara fifaninanana ara-panatanjahan-tena ny SAMPATI – FJKM Ambavahadimitafo Mikarakara fifaninanana ara-panatanjahan-tena ny SAMPATI |
Mikarakara fifaninanana ara-panatanjahan-tena ny SAMPATI
Ho fanohizana ny fankalazana ny jobily faha-60 taonan’ny SAMPATI XIII, dia fifaliana ho an’ny komity no manasa ny sampana velona rehetra eto amin’ny fitandremana handray anjara amin’ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena izay kasaina hatao mandritry ny volana may 2010 ho avy izao.
Ny taranja nomanina amin’izany dia ny Basket, Foot à 7 ary Volley.
Ny sampana rehetra izay liana andray anjara amin’izany dia hiangaviana hanantona ny tompon’andraikitra ao amin’ny SAMPATI mialohan’ny 7 marsa 2010 ho fandaminana ny fikarakarana rehetra. Afaka manantona an’i Rondro, Mahandry, Tafika na Sedera amin’izany.
Hisy fivorian’ny SAMPATI sy Tranainy rehetra manomboka ny asabotsy 20 janoary 2010 amin’ny 3 ora ka hatramin’ny 5 ora. Izany dia ho tanterahana isa-tapa-bolana ao amin’ny local scout.